SADDEX SHAXOOD OO KAA CAAWIYAY
Manchester City ayaa u dagaalami doonta inay ku guuleysato Carabao Cup markiisii ​​afaraad ka dib markii ay aadeen finalka ay xalayto la ciyaarayeen Tottenham.
City ayaa 2-0 ku garaacday Manchester United kulan ka dhacay Old Trafford si ay u gaaraan finalka markii 7aad muddo 9 sano ah.
Tababare Pep Guardiola oo ay kooxdiisu la ildaran tahay cudurka viruska ee Korona isla markaana daraasiin ciyaartoydiisa ahi ay dhulka jiifaan ayaa si fudud u garaacay deriskooda Manchester United ciyaar loo diiday goolal badan isla markaana fursado badan lumiyay.
Waxay la ciyaarayaan Tottenham bisha Abriil, haddii City ay badiso, waxay la mid noqon doonaan rikoorka Liverpool ee tartanka.
John Stones iyo Fernandinho ayaa labadoodaba u kala dhaliyay kooxda Manchester City.
Guusha City waa guushoodii labaad oo xiriir ah oo ay ka gaaraan koox weyn, ka dib guuldaradii 3-1 ee ka soo gaartay Chelsea Axadii, waxaana ka go’an inay ku sii jiraan qaab ciyaareedkooda sare marka ay doonayaan inay gaaraan hogaanka Premier League. Horyaal.
Halyeeyga Manchester United Roy Keane, oo xalay ka hadlay Sky Sport ayaa sharraxay seddex arrimood oo ka caawiyay Manchester City inay guuleysato: “Waxaan u maleynayay in Man City ay fiicnaan laheyd waana inaan dhahaa.
“Waxaan su’aalo naga qabnay bilihii la soo dhaafay. Waxay aheyd rabitaankooda, xoogooda iyo hamigooda, laakiin caawa waa ay soo bandhigeen.”
Roy Keane ayaa sheegay in saddexdaas arrimood ay siiyeen Manchester City gacanta sare.
Qarax lala eegtay ciidamada dowladda
“Waa kooxda ugu fiican …” ayuu yidhi Solskajer